HomeWararka Maanta SomaliskaDowlada Sweden oo labo sano ku dartay Sanduuqa Ceymiska ee A-kassa
September 21, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Miisaaniyadda Dowladda, ee lasoo bandhigay waxaa ku jira tallaabooyin cusub oo loogu talagalay lacag dhan 105 bilyan oo karoon. Mid ka mid ah soo-jeedinta cusub ee maanta ayaa ah in kororka sanduuqa caymiska shaqo la’aanta A-kassa lagu kordhiyay laba sano, waxaana jiri doona fursado badan sida waxbarasho, tusaale ahaan farsamada oo dad badani u baahan karaan si ay u beddelaan habka shaqadooda.
Miisaaniyada Cusub ayaana ka dhigan in labo oo dheeri ah ay fursad helaan Dadka aanan Shaqeynin ee Shaqada ka dhamaatay lacagna ka hela Sanduuqa Ceymiska ee Akassa
Dhaqaalaha Iswiidhan hada waxaa si ba’an u saameeyay dhibaatada corona waxaana la filayaa in dhaqaalaha uu hoos u dhaco 4.6 boqolkiiba sanadkaan shaqo la’aantuna ay kor u kacdo ilaa iyo 9.5 boqolkiiba sanadka soo socda, sida ku xusan miisaaniyada dowlada.
Laakiin soo jeedinta canshuurta la dhimay ee dakhliga, tabarucaada loo shaqeeyaha iyo shirkadaha ku dhowaad 30 bilyan oo karoon iyo kordhinta kaalmada gobolka ee dawladaha hoose iyo xoojinta kale ee la bartilmaameedsanayo ee loogu talagalay caafimaadka iyo daryeelka oo gaareysa 30 bilyan oo karoon, iyo sidoo kale taageero kala duwan oo lagu xoojinayo bay’ada ayaa la filayaa in isbadal uu ku sameeyo dhaqaalaha wadanka.
Dowlada waxay sheegtay in Miisaaniyadda cusub ay u dhiganto qiyaastii 75,000 shaqooyin dheeri ah sanadka soo socda.
Afhayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Moderaterna Elisabeth Svantesson ayaa rabtay inay aragto maalgashi badan oo dhanka garsoorka ah laakiin waxay si cad diirada u saartay shaqooyinka cusub iyadoo taageertay.
Xisbiga S ayaa dhanka kale kordhiyay kaalmaza kuwa aan shaqeynin waxaa la dhimay canshuuraha , xitaa kuwa aan shaqeynin.
Guud ahaan miisaaniyada ayaa ah Sanadka soo socda ee 2021 waxana Dowlada ugu tala gashay kabashada dhaqaalaha wadanka.
Xigasho/radiosverige qeybta Afka-swidhishka